MMS Resource pick-up & Drop-Off – Mason City sekoly COVID-19 foibe
MMS Resource pick-up & Famintinana ambany
Ny ekipanay, fampiasana toro-lalana avy amin'ireo manampahefana ara-pahasalamana, niasa tamin'ny fiarovana tsara ny votoatin'ny mpianatra hidin-trano, asio kitapo ireo entana ireo, ary asio soratra eo amin'ny anaran'ny zanakao sy nomerao ID. Ity dingana ity dia handray ny 11-15 Mey. Ho hitanao ny fandaharam-potoana hijanonana sy fidinana amin'ny faran'ity mailaka ity.
Rehefa tonga amin'ny fotoana voatondro anao ny fianakavianao, azafady azafady taratasy miaraka amin'ny anaran'ny zanakao sy ny karapanondro # voasoratra lehibe, pirinty ny fahasimbana mba hahafahantsika mampifanaraka ny fananan'ny zanakao amin'ny fiaranao. dia, raha azo alaina ny dianao, ny mpikambana iray ao amin'ny ekipantsika dia hampiditra ireo entana ao anaty fitoeran'entanao, mitazona ny fivezivezena ara-tsosialy. Tsy misy mpianatra na mpitsidika hiditra alohan'ny hidirana ao amin'ilay tranobe.
Raha manana Chromebook Mason City Schools Chromebook ny zanakao, sitrapo zanakao mitandrina ny Chromebook mandritra ny fahavaratra. Tsy ilaina ny mamerina ny Chromebook aminay.
**Raha mila fanamboarana ny Chromebook an'ny zanakao, afaka mahita vaovao ianao ao mcscovid19.com momba ny fanohanan'ny IT.
Zavatra ho an'ny Drop-Off
MMS Athletic Uniforms – Raha nahazo fanamiana ho an'ny fanatanjahan-tena lohataona ianao, hisy kodiarana mihidy eo akaikin'ny fidirana amin'ny Arena ao amin'ny toeram-pijanonana aoriana. Azonao atao ny manilika azy rehefa tonga haka na amin'ny fotoana eo anelanelan'ny 2 tolakandro sy 6 tolakandro mandritra ny herinandron'ny 11 may – 15faha.
Boky / Fitaovana MMS – Ho an'ireo entana voatanisa ao amin'ny tranomboky MMS, hisy ny fantsom-bidy mihidy eny akaikin'ireo fantsom-pifidianana izay ahafahanao mametraka ny bokinao.
Raha miverina any an-trano ianao dia mahatsapa fa manana boky ao anaty kitapo ireo zavatra nangalanao, azonao atao ny manary ny boky ao anaty sarety isaky ny misy 2 tolakandro sy 6 tolakandro mandritra ny herinandron'ny 11 may – 15faha.
Sekoly na Mpampianatra – Zavatra naterina – Raha mila miverina fitaovana nindrana / nampiasaina ho an'ny iray kilasinao ianao, azonao atao ny hampiala azy mandritra ny daty fanangonana entana. Asio fampandrenesana marika iray sy marika miaraka amin'ireto fampahalalana manaraka ireto:
Anaran'ny Mpianatra & Laharana karatra
Fitaovana kilasy / fianarana dia nampiasaina
Anaran'ny mpampianatra (ny mpampianatra izay avy amin'ny entana(S) nindramina)
Fitaovana Band – Azafady mba jereo ny fampahalalana avy amin'ny talen'ny tarika amin'ny mailaka isan-kerinandro momba ny safidy amin'ny fahavaratra ho an'ny fitaovana any an-tsekoly. Raha mila manary ny fitaovana fananan-tsekoly izay nampiasainao nandritra ny 2019-20 taom-pianarana, afaka mandefa mailaka ho an'Andriamatoa ianao. Hinson ([email protected]). Hanao fandaharana aminao izy hamita ny fahatapahana.
MMS Item Drop-Off / Fandaharam-pifandraisana – Mey 11-15
Ny fandaharam-potoana dia mifototra amin'ny toerana misy ny laharana hidin'ny zanakao. Raha tsy mahatadidy ny toerana misy azy ireo ny zanakao, ny zanakao dia misy zavatra tokony alaina any amin'ny toerana hafa ao amin'ilay trano (toy ny efitrano fianarana), na manana toe-javatra mampihena, izay manakana anao tsy ho tonga amin'ny fotoana voatondro, azafady mailaka mailaka [email protected]. Raha manana fanontaniana momba ny fahazoana fanafody amin'ny hôpitaly izahay, azafady mailaka mailaka [email protected].
Alatsinainy, 11 mey – 100 Door Door (C-9)
2:00 – 4:00 – (100 elatra (1000-1192) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
4:00 – 6:00 – (100 elatra (1193-1385) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
2:00 – 6:00 – (Potika ny boky fitehirizam-boky sy fiteny amin'ny fiteny)
Talata, 12 mey, 200 Door Door (C-7)
2:00 – 4:00 – (200 elatra (2000-2193) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
4:00 – 6:00 – (200 elatra (2194-2387) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
Alarobia, 13 mey, 300 Door Door (C-5)
2:00 – 4:00 – (300 elatra (3000-3208) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
4:00 – 6:00 – (300 elatra (3209-3417) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
Alakamisy, 14 mey, 400 Door Door (C-3)
2:00 – 4:00 – (400 elatra (4000-4206) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
4:00 – 6:00 – (400 elatra (4207-4413) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana & 500 elatra (5000-5052) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
Zoma, 15 mey, 800 Door Door (D-10)
2:00 – 4:00 – (800 elatra (8000-8165) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
4:00 – 6:00 – (800 elatra (8166-8330) fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana)
Raha manana manana fanontaniana momba ny manangona na manala entana ianao, azafady alefaso Andriamatoa. Murzynowski, filoha mpanampy ([email protected])